Fito ny zotra nampiakatra: nihatra tokoa ny saran-dalana 500 Ar | NewsMada
Fito ny zotra nampiakatra: nihatra tokoa ny saran-dalana 500 Ar
Par Taratra sur 02/08/2018
Nizotra tamim-pilaminana ny fiatrehan’ny mpandeha ny fiakaran’ny saran-dalana ho 500 Ar, omaly, ho an’ny zotra maromaro mivondrona ao anatin’ny vondrona Fitaterana mendrika eto Antananarivo ( FMA). Efa nisy rahateo ny taratasy fampahafantarana mialoha ny fiakaran’ny saran-dalana ka tsy nanavao intsony ny mpanjifa. Ireo tsy nanaiky handoa ny 500 Ar, nisafidy ny hiova zotra na nandeha an-tongotra fotsiny. Fito ireo zotra nanondrotra ny saran-dalana: ny Mirindra 163, 194, ny kaoperativa Miary 165, ny Sitraka 109, ny Kofitama 143, ny Mitambatra 166 ary ny Onja 192.
Zotra be mpandeha ary ampiasain’ny mpianatra betsaka ny 166 sy ny 194 satria mampitohy ny Renivohitra amin’ny oniversiten’Antananarivo. Hisy fiantraikany amin’ny vola mivoaka isan-tokantrano ho an’ny mpampiasa isan’andro ireo zotra ireo ny sondro-bidy. Manodidina ny 16 000 Ar ny vola amboniny tadiavina hamenoana ny banga raha miasa na mianatra 20 andro isam-bolana ka mandeha taxi-be maraina sy hariva fotsiny ny olona efatra amin’ny tokantrano iray.
Manomboka izao, tsy manaiky ny tapa-dalana 200 Ar intsony ny taxi-be fa efa 300 Ar na 400 Ar na hiala afaka « arret » iray fotsiny aza. Ny hita omaly, nihena ny mpandeha taxi-be amin’ireo zotra nampiakatra ny sara-dalana ho 500 Ar ireo. Mbola nilaza ny kaoperativa 54 mivondrona ao anatin’ny UCTU miasa eto an-dRenivohitra fa tsy hampiakatra ny saran-dalana fa miandry ny vola « compensation » avy amin’ny fanjakana.